Home » Lahatsoratra farany farany » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Olona sivy no matin'ny fianjerana fiaramanidina Russia
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana Rosia • Safety • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Olona sivy no maty, maratra marobe tamin'ny fianjeranan'ny fiaramanidina Russia
Ny tsy fahombiazan'ny motera dia miteraka lozam-piaramanidina mahafaty any Siberia any Russia.
Ny fiaramanidina dia an'ny toko eo an-toerana an'ny vondrona fanatanjahantena paramilitary DOSAAF.
Ny elatra nianjera tamin'ny tany tamin'ny elany no nivadika.
Mpiasa an-tsambo roa sy parachutista fito no maty, olona sivy ny fitambarany.
Olona sivy no maty ary marobe no naratra taorian'ny fianjeran'ny fiaramanidina kambana Let L-410 nidina tany amin'ny Faritra Kemerovo any atsimo andrefan'ny Siberia any Russia. Olona sivy ambin'ny folo no tao anaty fiaramanidina - mpanamory 2 sy skydivers 17.
Ny fiaramanidina dia an'ny toko iray an'ny DOSAAF vondrona fanatanjahan-tena paramilitary ary nahavita ny sidina fahefatra ny andro rehefa niharan'ny tsy fahombiazan'ny maotera fotoana fohy taorian'ny fiaingana.
Niezaka ny hampidina ny fiaramanidina ireo mpanamory fiaramanidina, saingy nianjera tamin'ny elany tamin'ny tany ny fiaramanidina ary nivadika, hoy ny sefon'ny Kemerovo DOSAAF.
"Raha ny angom-baovao azoko dia mpiasa an-tsambo roa sy parachutista fito no maty, olona sivy ny fitambarany," hoy ny tompon'andraikitra.
Mbola tsy fantatra mazava izay nahatonga ny tsy fahombiazan'ny maotera maty satria teo amin'ny lafiny teknika ny fiaramanidina ary nahavita sidina telo tamin'io andro io.